Mayelana NATHI - Yantai Joyshing Glass Co., Ltd.
I-Yantai Joyshing Glass Co, Ltd njengomkhiqizi okhethekile futhi ohola phambili kanye nomhlinzeki wemikhiqizo eyahlukahlukene yengilazi eChina, uhlose ukuhlinzeka ngesixazululo sesilazi esithuthukile sokwakha, ukuhlobisa, ezokuthutha, ukuzivikela, ezokungcebeleka nezemidlalo njalonjalo. IJoyshing Glass igxile ekwenziweni kwengilazi eyi-bespoke egobile. Singakwazi ukukhiqiza ingilazi egobile ibe yinhle kakhulu kunoma iyiphi irediyasi futhi ingilazi yethu egobile ingena ifakiwe, i-laminated, tempered (toughened), futhi iphindwe kabili, ukuhlangabezana nezidingo zakho. Izicelo ezijwayelekile zengilazi yethu egobile zifaka phakathi izitolo ezigobile, amawindi agobile, ama-balustrade eglasi agobile nezikrini zokugeza ze-bespoke.
Siyaziqhenya ngokuncintisana kwethu okuqinile okuvela kubuchwepheshe obuphambili nokulawulwa kwekhwalithi okuqinile. Besihlale sizinikele ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwamasu wokukhiqiza athuthukile futhi sasebenzisa ukulawulwa kwekhwalithi eqinile ngesinyathelo ngasinye ukuqinisekisa imikhiqizo efanelekile. Njengenye yamabhizinisi ahamba phambili, i-JOYSHING inganikeza ngemikhiqizo ehlukahlukene enekhwalithi ephezulu ngamanani ancintisanayo.I-Glass Emnene Egoqiwe, okugoba ingilazi ethambile, ingilazi yezokuphepha ekhiqizwa ngenqubo yokwelashwa ngengilazi kanyekanye kanye nokwelashwa okushisa. Inqubo esetshenziselwe ukuthola ingilazi evuthayo yeJoyshing Glass iqukethe ukufudumeza ingilazi eyisicaba kuze kufike ezingeni lepulasitiki, kunikeze ukuvuleka okufiselekayo enqubweni yokushisa ingilazi ngamajethi omoya obandayo.
Ngaphandle kobuchwepheshe obuthuthukile nokulawulwa kwekhwalithi okuqinile, ukuncintisana okuqinile kwe-JOYSHING nakho kuvela kwinsizakalo enobungcweti. Ithimba likaJOYSHING elinolwazi nelinguchwepheshe lingahlinzeka ngosizo oludingekayo noludingekayo nangemva kokuthengisa ukuze kuqinisekiswe ukuthi izidingo zawo wonke amakhasimende, noma ngabe zinkulu noma zincane, ziyaneliswa ngokushesha nangempumelelo.
Ingilazi evuthiwe enomfutho ifinyelela ekukhuphukeni kwamandla amane uma kuqhathaniswa nengilazi enamathiselwe yobukhulu obufanayo futhi uma iphukile, iqhekeka ibe yizinqamu ezingenakubalwa zezingcezu ezincane ezinesimo se-cubicle esingaphezulu noma esincane.
Ingilazi egobile (ethambile) ingasetshenziswa ukwengeza imigqa ebushelelezi ehambayo esakhiweni. Ilungele ukusetshenziswa emafulethini asezitolo, amabalustrade kuvulandi noma ezitebhisini, ingilazi egobile (eqinisiwe) ingangeza ne-twist eyingqayizivele ekhaya elenziwe ngobuciko.